Dani iyo Madoobe oo ku baaqay shir dag dag ah | KEYDMEDIA ONLINE
Dani iyo Madoobe oo ku baaqay shir dag dag ah
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa ku baaqay qabsoomidda shir lagu xalinayo khilaafka ka jira hab maamulka doorashooyinka Dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay in ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay Dalka uga dhici lahayd.
Saciid Dani iyo Axmed Madoobe waxa ay sheegeen in ay lama huraan tahay in shir ay isugi yimaadaan Dowladda Federaalka ah iyo Dowladaha Xubnaha ka ah 30ka January 2021.
Qoraal labada maamul si wada jir ah usoo saareen ayaa lagu yiri, “ Dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayagoo tixgalinaya wakhtiga xasaasiga ah ee lagu jiro, una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay, waxay shaaciyeen Guddiyada Maamulka doorashada ee SIEIT. Haseyeeshee, waxaa nasiib darro ah in Madaxda Dowladda Federaalka ah ay ka cago jiidayso qabsoomidda shir lagu xaliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada Dalka.
“Haddaba, waxaan dhamaan Ummadda Soomaaliyeed, Saamileyda siyaasadda Soomaaliya iyo Beesha Caalamkaba la socodsiinaynaa in Puntland iyo Jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay Dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto daganaansho siyaasadeed oo horay u sii wada hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya”.
“Sidaa darteed, waxaan Madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Dowladaha Xubnaha ka ah ugu baaqaynaa in shir deg deg ah laysugu yimaado Magaalada Mogadishu 30ka January 2021 si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada”.
“Waxaan sidoo kale Beesha Caalamka ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan in Dalka laga badbaadiyo khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro 8 February 2021 ayadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada”.